Kudla wachaza uYesu neenwele ezinde, kodwa loo nto ngokwenene iBhayibhile?
Clipboard indlela artists ezimbalwa cinga ngendlela uYesu ikhangeleka ngathi.
"Ndawunikela umhlana wam abo wandibetha nezidlele zam kwabo wayekhupha neendevu zam. Ndabusithelisa ubuso bam ehlazweni nasekutshicelweni "- Isaya 50: 6..
Eshukumayo kunye imifanekiso kuboniswe uYesu iinwele ezinde kunye indevu. Ukuba iindevu kunye neBhayibhile kuba ithi "incothulwe neendevu zam." Ilizwi iBhayibhile ngenye indlela isiprofeto sikaYesu ukubandezeleka emnqamlezweni. Kodwa kuye kucingelwa ukuba uza abe neenwele ezinde?
Yiba iinwele short
Ngoku ke ndawo eBhayibhileni ngoYesu ubude iinwele kodwa kukho izibhalo ezibonisa ukuba uYesu abe neenwele ezimfutshane. UPawulos ubhala ukuba kulihlazo ukuba indoda okunene ethi ibe neenwele ezinde.
Okanye musa ufunde uhlobo kakhulu ukuba kulihlazo ukuba umntu ukuba ibe neenwele ezinde? - 1 Kor. 11:14.
Dom 16:13: "Wathi uDelila kuSamson:" Kude kube ngoku na ukundilalanisa and ukuxokisa kum. Khawundixelele kaloku ukuba indlela tie kuwe phezulu "Wathi kuye:". Ngoko, xa uthe waluka izihlwitha ezisixhenxe zentloko yam ngosinga kwi ngelaphu yakho "".
A Womcheba waba kubandakanywa besela iwayini. Kodwa uYesu akazange ngumahlulwa ngenxa yokuba basela iwayini yaye ngaloo ndlela siyaqonda ukuba akazange abe neenwele ezinde.
"Nyana womntu [uYesu] weza, yaye udlayo, uselayo, ngokungafanelekileyo, kwaye uthi: Yabonani, umntu olidla-kudla, olisela-wayini, umhlobo wababuthi berhafu naboni?" - Luka 7:34
Mna ukufunda okuninzi online ukuba uYesu abe neenwele ezinde okanye elifutshane. Kubonakala ukuba lo mba luqeshwe abaninzi kakhulu ngenxa yokuba kukho okuninzi ebhaliweyo ngale nto.